हदम्याद बहस– वर्षौँपछि प्रहरीले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा दसी प्रमाण अदालतलाई के बुझाउँछ ? « Nagarik Khabar
हदम्याद बहस– वर्षौँपछि प्रहरीले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा दसी प्रमाण अदालतलाई के बुझाउँछ ?
प्रकाशित मिति : 26 May, 2022 11:35 am
काठमाडौँ । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन वा नहटाउने बहस चलिरहेको छ । मौजुदा मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ अनुसार बलात्कारसम्बन्धी घटनामा जाहेरी दिने हदम्याद एक वर्ष छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारीले हदम्याद राख्दा पीडितले न्याय नपाउने स्थिति भएको भन्दै हदम्याद हटाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गरेको बताएकी छिन् ।
उनका अनुसार बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनासम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राखिनु उचित हुँदैन । उनी मात्र होइन, थुप्रै महिला नेतादेखि, अभियन्तासँगै अधिकारकर्मीहरूले हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
तर, अपराधशास्त्रीसमेत रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी डा.कृष्णकुमार तामाङ भने हदम्याद हटाउने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न अदालतलाई त दसी, सबुत, प्रमाण र बयान चाहिन्छ । यो सबै दिने भनेको घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले हो । र, ८ वर्षपछि घटना सार्वजनिक हुँदा त प्रहरीसँग पीडितको बयानबाहेक केही हुन्छ ?’
हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी अपराधसंहिता– २०७४ मा छ । हदम्याद हटाउन परे संहिताको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी परिच्छेदको २१९ देखि २२२ सम्मका प्रावधान हटाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।